Nserahwɛfo Nye Nserahwɛ: Jehovah Adasefo Ɔfese ahorow a ɔwɔ Patterson, Wallkill, na Warwick
Ebɛyɛ dɛn abɔ hɛn amandzɛɛ dɛ ereba nserahwɛ? Klek ɔfã a wɔato dzin “Mepɛ Dɛ Meyɛ Nserahwɛ Ho Nhyehyɛɛ—Hɛn Dodow Nndu 20” no do. Sɛ wɔbor nyimpa eduonu a, klek ɔfã a wɔato dzin “Mepɛ Dɛ Meyɛ Nserahwɛ Ho Nhyehyɛɛ—Yɛyɛ Nyimpa 20 Anaa Dza Ɔbor Dɛm.”
Mepɛ Dɛ Meyɛ Nserahwɛ Ho Nhyehyɛɛ—Hɛn Dodow Nndu 20
Mepɛ Dɛ Meyɛ Nserahwɛ Ho Nhyehyɛɛ—Yɛyɛ Nyimpa 20 Anaa Dza Ɔbor Dɛm
Ndzɛmba A Wɔada No Edzi A Woarankasa Botum Akɔhwɛ
Bible No Na Nyankopɔn Dzin No. Sɛ ekɔ dɛm bea yi a, ibohu Bible ahorow pii a ɔyɛ na nye nsɛm ahorow bi a ɔkyerɛ mbrɛ wɔakora Nyankopɔn ne dzin wɔ Kyerɛwsɛm no mu ɔmmfa ho mbɔdzen a nkorɔfo abɔ dɛ wobeyi efi mu no. Ebɛsan so ehu Bible a ɔyɛ na ho mfonyin ahorow na Bible ho ndzɛmba afofor so a orikyin no ho.
Ɔman Ma Jehovah Ne Dzin. Sɛ eba dɛm bea yi a, ibohu Jehovah Adasefo hɔn abakɔsɛm ho mfonyin ahorow pii. Ndzɛmba ahorow a akyɛr, nkorɔfo hɔn asetsena mu nsɛm, na mfonyin ahorow no kyerɛ mbrɛ Jehovah dze no nkakrankakra akyerɛ no nkorɔfo kwan, akyerɛkyerɛ hɔn na ɔaka hɔn abɔ mu ma wɔayɛ n’apɛdze.
Wiadze Nyina Edwumayɛbea Tsir—Gyedzi A Wɔda No Edzi. Dɛm bea yi so ma yehu mbrɛ Akwankyerɛ Kuw egyinatukuw ahorow no dwumadzi tse nye mbrɛ wɔboa Jehovah Adasefo ma wodzi Bible mu akwankyerɛ ahorow do. Akwankyerɛ no mu bi nye dɛ yɛnye hɛnho hɛnho behyia mu, yɛbɛyɛ esuafoyɛ edwuma no, yebosuÞa Jehovah noho adze na yaada ɔdɔ edzi akyerɛ hɛnho hɛnho.
Nserahwɛ A Obi Nye Wo Kɔ
Dɛm nserahwɛ yi ma ihu Ɔfese ahorow na adan afofor so a ɔwɔ Warwick hɔ no.
Wɔyɛ mfonyin ahorow a ɔwɔ hɛn nwoma ahorow mu no, na wɔyɛ ndzɛmba a wɔbɔ tsie na video so ho edwuma. Ibohu Bible skuul ahorow so a wɔyɛ no wɔ ha no ho nsɛm.
Wotsintsim Bible ho nwoma ahorow bɔbor ɔpepem 25 afe biara. Wɔdze hɛn nwoma ahorow no mona hɛn nkorbata ahorow a wɔwɔ wiadze nyina wɔ kasa bɔbor 360 mu, na wɔsan so dze bi mona Jehovah Adasefo asafo ahorow bɔbor 15,000 a ɔwɔ United States, Canada, na Caribbean.
Edwumayɛbea Ahorow Nye Nserahwɛ: United States